Zanu-PF Politburo to Deliberate on Shamuyarira Hero Status
Nathan Shamuyarira (right) left active politics in 2010 to dedicate time to putting together a book on Zimbabwe’s liberation struggle, especially a memoir on President Mugabe’s central role in Zimbabwe's liberation struggle. (Courtesy Photo: Citizen Journalsit)
WASHINGTON — The Zanu PF politburo is expected to meet soon to deliberate on the hero status of the late former cabinet and Zanu-PF Politburo member, Nathan Shamuyarira (85), who died Wednesday night at Harare's West End Clinic where he had been getting medical attention for some time.
Zanu PF sources told Studio 7 indications are that Shamuyarira will be declared a national hero though some of them are not happy with his involvement in some political processes during the liberation struggle.
The veteran politician, who is a former information and foreign affairs minister, was part of a group that spearheaded the formation of the Front for the Liberation of Zimbabwe (FROLIZI) in the 1970s after some members of Zapu then led by Joshua Mqabuko Nkomo left the party to form Zanu.
Shamuyarira left government in 2000, saying he wanted to concentrate on his work in Zanu-PF, where he was secretary for information and publicity.
He then left active politics in 2010 to dedicate time to putting together a book on Zimbabwe’s liberation struggle, especially a memoir on President Mugabe’s central role in Zimbabwe's liberation struggle.